April 12, 2021 by bartez64
OnePlus pakupedzisira ine makamera anoyera kusvika pakanakisa izvo Samsung, Xiaomi, neGoogle zvavanofanira kupa.
OnePlus yakagadzira kukanda kwayo muchikamu chepamusoro-kumagumo makore maviri apfuura neiyo OnePlus 7 Pro. Chigadzirwa chakaenda kuzvigunwe-zvigunwe pamwe ne nhare dzakanakisa dzeAndroid, uye OnePlus paakarovera parutivi rwezvinhu, iyo kamera yaive yekudonha.
Izvo zvaive zvakadaro gore rapfuura ne OnePlus 8 Pro naizvo. OnePlus yakaita nhanho huru munzvimbo dzakakosha, ichiendesa QHD + AMOLED kuratidza ine 120Hz zororo mwero, 30W isina waya kuchaja, uye IP68 guruva uye kuramba kwemvura kekutanga. Asi sekutanga kwayo, iyo 8 Pro haina kungoenzana nevakwikwidzi vayo maererano necamera kamera yezvinhu.
Iyo OnePlus 8 Pro yakatanga munguva yekugadzirisazve OnePlus. Ichitarisana nekutengesa mureza, kambani yakashandura yakatarisana nechikamu chepakati-renji nekuunzwa kwe Nord gore rapfuura, uye kubheja kunoratidzika kunge kwakabhadhara - OnePlus yakarova mamirioni emafoni kutengesa mukota kekutanga muQ3 2020, uye huwandu hwakawanda hweizvozvo hwaive pasi kuNord.
Pamwe chete nekupinda mukati-kati uye zvikamu zvebhajeti, OnePlus yakagadzirisa vashandi vayo vemukati nemavetera kubva kuSamsung neHTC kutungamira makiyi esoftware zvirongwa, kumisikidza lab kamera yekugadzirisa kushomeka kwenguva refu, uye ndokutanga kupa zvemuno software maficha muOxygenOS. Munguva pfupi yapfuura, izvo akavimbisa kuisa $ 150 mamirioni mune kamera yayo Hardware uye simbisa hukama hwakareba-neakagadzira kamera, Hasselblad. Muchidimbu, iyo OnePlus ye2021 haina kuzivikanwa kune zvayaive mu2019.
Mhedzisiro yezvese izvi kuyedza ndeye OnePlus 9 Pro. Runhare runopa kukwidziridzwa kunonakidza mune ingangoita nharaunda dzese kubva kwarakatangira, asi izvo zvaunoda kuti uzive kutanga uye zvakanyanya ndechekuti makamera ari ekupedzisira akakura. Iko kusanganiswa kwemalensi matsva uye kudyidzana neHasselblad pamusoro pekugadzirisa kwemavara zvinoreva kuti iwe unowana kamera inozvibata pachayo ichipesana nezvakanakisa izvo Samsung, Google, Xiaomi, nevamwe zvavanofanira kupa.
Asi kuvandudza uku kunouya nemutengo. Iyo OnePlus 9 Pro inotengesa ne $ 969, $ 70 yakawanda kupfuura iyo iyo 8 Pro yakatanga pagore rapfuura. Zvakanyanya kuomarara muIndia, uko iyo 9 Pro inouya pa- ₹ 64,999 ($ ​​900) - yakazara izere ne17% pamusoro peiyo 8 Pro gore rapfuura. Saka ngatione zvaunowana pamutengo unobvunza iwo, uye kana uchifanira kufunga iyo OnePlus 9 Pro kana iwe uri kutsvaga kukwidziridzira kune 2021 mureza.
Chinonyanya kukosha: Iyo OnePlus 9 Pro inowana zvese zvinhu nenzira kwayo. Muviri mudiki, unogadzirika, stellar makamera, hombe, inopenya, uye inokatyamadza OLED kuratidza, kuita kusingafadzi, uye nekuvandudzwa kusingaoneki mukugadzirwa kwayo. Asi subpar hupenyu hwebhatiri uye 5G quibbles inoidzora kubva pakukwana.
65W wiring kuchaja uye 50W isina waya kuchaja
Yakanaka 120Hz AMOLED kuratidza
IP68 guruva uye mvura kuramba
Sub-par bhatiri hupenyu
5G inogumira kuT-Mobile & Verizon muUS
Software bugs pakuvhura
$ 1069 pa Best Buy
$ 1069 ku Amazon
$ 1069 paOnePlus
Kuongorora uku kwakanyorwa pamwechete naHarish Jonnalagadda naDaniel Bader mukati memazuva gumi.
Foni yaHarish yakanga ichimhanya OxygenOS 11.2.LE15DA kunze kwebhokisi uye yakagamuchira zuva-rimwe kugadzirisa kuna 11.2.1.1.LE15DA, uye akashandisa nguva yake yekuongorora kunetiweki yeAirtel muHyderabad, India.
Foni yaDaniel yaimhanya OxygenoOS 11.2.LE15AA kunze kwebhokisi uye akagamuchira yezuva-imwe yekuvandudza kuna 11.2.1.1.LE15AA, uye akashandisa ongororo yake paTELUS network muToronto, Canada.
OnePlus 9 Pro: Mutengo uye kuwanikwa
Iyo OnePlus 9 Pro yakatanga kutengeswa Kubvumbi 2 kuNorth America, UK, Europe, uye India. Iyo base modhi inouya ne8GB ye RAM uye 128GB yekuchengetera, uyezve kune 12GB / 256GB edition kana iwe uchida yekuwedzera yekuchengetedza.
Heano kuputsika kweOnePlus 9 Pro mitengo mumatunhu akasiyana epasi:
OnePlus 9 Pro (8GB / 128GB): $ 969 USD / $ 1,349 CAD / £ 829 / ₹ 64,999
OnePlus 9 Pro (12GB / 256GB): $ 1,069 USD / $ 1,499 CAD / £ 929 / ₹ 69,999
Sezvo yezuva rekuburitsa, iyo $ 969 OnePlus 9 Pro haisi kuwanikwa kuti utenge. OnePlus yati iri kushanda pakuzadza hesera yemhando yakachipa, asi hapana nguva yekuti ichave iripo riini. Parizvino, kana iwe uchida OnePlus 9 Pro, unofanirwa kutenga iyo inodhura kwazvo $ 1069 vhezheni.
Kusiyana nekuburitswa kwekare, iyo OnePlus 9 Pro haina kudhura zvakanyanya muIndia pamusoro pemamwe misika yepasi rose. Inotanga pa- ₹ 64,999 ($ ​​900), izere ne17% kukwira kubva pane izvo 8 Pro yakatanga pagore rapfuura. Izvi zviri kunyangwe hazvo musiyano weIndia unopa kuunganidzwa kwe5G muzita chete - inongova nemabhendi maviri eSub-6.
Foni inotengeswa muMorning Mist, Pine Green, uye Stellar Neruvara rwakasiyana. Mavara ese matatu achave aripo muIndia, UK, uye EU, asi iyo Stellar Nhema sarudzo haisiri kuita nzira yayo kuNorth America.
OnePlus yaive nenyaya zhinji nekuwanika gore rapfuura, uye takaudzwa kuti hazvizove zvakadaro neOnePlus 9 dzakateedzana. Ose ari maviri OnePlus 9 uye 9 Pro anofanirwa kuwanikwa muhuwandu hwakakwana mune ese mavara akasiyana uye anotangisa misika. OnePlus yakataura zvakare kuti icharamba ichitengesa iyo OnePlus 8 uye 8 Pro kusvikira huwandu hwazvino hwapera.
OnePlus 9 Pro: Kugadzira uye kuratidza
Iyo OnePlus 9 Pro inoita kunge yakawanda mafoni kunze izvozvi, asi inouya pamwechete munzira dzese dzakakodzera. Ini ndinofunga, saka, zvakanyanyisa kukosha kuenzanisa foni neOnePlus zvigadzirwa zvekare kuti uone kuti kure nekambani nzira yekugadzira yakashanduka sei. Kune zvakanyanyisa hunyengeri kune iyo OnePlus mutsetse gore rino, zvese maererano neruvara uye kumira-kunze maaccents kana makuru anokwezva ziso rako.
OnePlus 'dhizaini mutauro wakachinja mu2021, uye iyo 9 Pro inotaridzika yakanakisa.
Mberi kwefoni iri ringer yakafa yeiyo OPPO Tsvaga X3 Pro, ine gomba rayo rakatarisa kuruboshwe nemakona anogara akakombama. Iyo Gorilla Girazi 5 inosangana nealuminium furemu pakakona kashoma pane yegore rapfuura OnePlus 8 Pro, iyo inodimbura pasi pane zvinokanganisa zvinobata parutivi rwechidzitiro. Mabhatani efoni ndimo maunotarisira kuti uzviwane pane OnePlus foni - simba bhatani kurudyi rakatenderedzwa neiyo mainstay yambiro inotsvedza iyo inoramba ichingoshanda sezvayakamboita. Rutivi rworuboshwe rwakabata vhorumu rocker, iyo inodzvanya sezvayakamboita.
Kumashure kumashure, iyo Morning Mist modhi inopenyera kumashure kwauri, inopenya girazi kupedzisa iyo inofamba zvishoma nezvishoma pakati pesirivheri uye nhema. (Iyo Pine Green uye Stellar Nhema dzakasiyana dzine matte kupedzisa pachinzvimbo, neyekupedzisira kuteedzera kunzwa kweSandstone kupera kweOnePlus One.) Zvino pane iyo kamera stack iyo iwe yaungangodaro waona mumiriyoni inopa ikozvino. Kutanga, inowanikwa kumusoro kuruboshwe kwechigadzirwa, nzvimbo yatakaona ichishandiswa pakuona kukuru pane OnePlus 8T gore rapfuura. Maviri makuru macamera sensors anobata ziso, akasungwa akasungwa neanoverengeka madiki maseru anovaka akanakisa OnePlus kamera chiitiko chatakamboona kusvika nhasi.
Runhare runotsvedza, izvo zvinoita kuti nyaya inyanye kukosha. Iyo kambani ine mashoma sarudzo dzekutanga-bato nguva ino kutenderera, saka iwe uchazoda kuisa mari mune imwe ye akanakisa OnePlus 9 Pro kesi kukurumidza kukuru.
Iyo SIM kadhi slot iri pazasi padyo ne USB-C yekuchaja chiteshi, uye nepo kare mafoni eOnePlus aipa mbiri-SIM yekubatanidza mumatunhu ese, izvo zviri kuchinja muna 2021. Iyo North America vhezheni ye9 Pro ine imwechete- SIM slot, iine mamwe masiyano epasirese anowana maviri-SIM kubatana.
Iyo OnePlus 9 Pro ine 6.7-inch AMOLED kuratidza ine QHD + (3216 x 1440) resolution. OnePlus inodaidza iyi Fluid Ratidza 2.0, uye yekumira yekuwedzera apa ndiyo LTPO (yakaderera-tembiricha polycrystalline oxide) tech. Iyo tekinoroji inobvumidza iyo 9 Pro kushandura zvine simba chiyero chekuzorodza zvichibva pane zvemukati zvinoratidzwa pachiratidziri. Kubatsira kwakakosha kweLTPO? Iyo AOD analog wachi ikozvino inoratidza masekondi ruoko, uye OnePlus inocherekedza izvi zvaingoitika nekuda kwetekinoroji nyowani.
OnePlus haisi yekutanga kuburitsa foni neLPO tech; Samsung yakazvizivisa gore rapfuura paCherechedzo 20 Ultra, uye iyo S21 Ultra inoshandisa iyo imwecheteyo kuratidza tech kushandura zvine simba mwero wekuzorodza kubva ku11Hz kuenda pa120Hz. Asi iyo OnePlus 9 Pro inokwanisa kuenda kwese kubva 1Hz kusvika 120Hz kuburikidza nekushandisa kwetsika mutungamiriri.
Ichi ndicho chimwe cheakanakisa ekuratidzira iwe aunowana pane chero runhare nhasi.
Iyo yekuratidzira ndeimwe yeakanakisa iwe aunowana pane chero foni nhasi, ichipa yakanakisa misiyano nhanho, kukwirira kupenya, uye makuru ekuona angles. Iyo pani yacho pachayo yakatenderedzwa segore rapfuura, asi iyo curvature pachayo haina kunyanyisa, uye sezvo chassis iri padanho rakakora, haina chero nzvimbo isinganzwisisike yekushandisa.
Iwe zvakare unowana stereo kurira apa, uye segore rapfuura, chinzwa nzeve chinowedzera kumusoro semutauri wechipiri. Inzwi rinobuda harina kupfuma semidziyo ine yakafanana mutauri mune chaiyo stereo kumisikidzwa - senge Xiaomi Mi 11 - asi zvinoita mutsauko kana uchimhanyisa mavhidhiyo kana kutamba mitambo.
Pachinyorwa ichocho, OnePlus ine inonakidza nyowani ficha inonzi Hyper Kubata iyo inowedzera yekukwirisa skrini yekuvhota kusvika ku360Hz - kazhinji 240Hz - kudzikisa yekuisa lag. Chinhu chinogumira pamitambo mishoma senge Call of Duty Mobile, League of Legends, PUBG Mobile, uye Brawl Nyeredzi izvozvi, iine akawanda akaiswa kuwedzerwa gare gare.
Nehurombo, iyo chaiyo yekubata chiitiko neiyo OnePlus 9 Pro haisi yenguva dzose inoenderana. Ini (Daniel Bader) nevamwe vezera rangu muindastiri takasangana nenyaya dzekumucheto panguva yekutaipa pane yakasarudzika Gboard keyboard, kunyanya kana uchikurumidza kubaya iyo ? 123 bhatani pazasi kuruboshwe kona kuita ma key echipiri. OnePlus yakabvuma nyaya iyi, asi hapana imwe yenyaya kubva kuvhurwa yakagadzirisa dambudziko.
OnePlus yakazopedzisira yaunza yakagara-ichiratidzwa (AOD) gore rapfuura ne OxygenOS 11, uye chimiro chaicho pachacho chinopa zvakawanda zvekugadzirisa. OnePlus yakabatana neParsons Chikoro Dhizaini pamusoro peiyo Insight AOD, uye inokupa iwe kutarisisa kutarisisa kwenguva yakashandiswa uchishandisa nhare uye nhamba yekusvinura mukati mezuva rezuva.
Kune zvakare Canvas AOD iyo inoita kuti iwe uwedzere ako wega mafoto uye woaita iwo mune silhouette. Ino nguva kutenderedza, hapana sarudzo yeBitmoji; OnePlus inoti Bitmoji AOD yakanga ichikanganisa mashandiro uye kupisa foni zvakanyanya, saka haichawanikwe.
OnePlus 9 Pro: Hardware & kuita
OnePlus 'yakakosha tenet iri kuendesa akanakisa kuita, uye izvo hazvina kuchinja muna 2021. Iyo OnePlus 9 Pro inofambiswa neQualcomm yazvino 5nm Snapdragon 888, uye inouya ne8GB yeLPDDR5 RAM uye 128GB yeUFS 3.1 yekuchengetedza seyakajairwa.
Software OkisijeniOS 11, Android 11
kuratidza 6.7 ″ (3216 × 1440) 120Hz AMOLED
chengetedzo 128GB / 256GB UFS 3.1
Kumusoro Kamera 1 48MP IMX789 ƒ / 1.8 (yepakutanga)
Kumusoro Kamera 2 50MP IMX766 ƒ / 2.2 (yakafara-kona)
Kumusoro Kamera 3 8MP ƒ / 2.4 (runhare)
Kumusoro Kamera 4 2MP (monochrome)
Front Camera 16MP IMX471 ƒ / 2.4
Kubatana Wi-Fi 6, BT 5.2, NFC, AptX HD
bhatiri 4500mAh | 65W, 50W isina waya
chibatiso Mu-skrini yemunwe
mavara Mangwanani Mhute, Sango Girini, Stellar Nhema
miganhu 163.2 X 73.6 X 8.7mm
Iyo Snapdragon 888 ihwo huwandu hunozivikanwa panguva ino, uye chipset inounza inonakidza yekuita mibairo pamusoro pegore rapfuura Snapdragon 865. Izvo zviri pasi kune iyo nyowani yeCortex X1 musimboti inokwira kusvika ku2.84GHz, uye chipset zvakare ine matatu eCortex A78 zvigadzirwa zvakavharirwa pa 2.42GHz, uye ina Cortex A55 cores pa 1.80GHz.
Iyo Adreno 660 GPU inopa kusvika ku35% kuita zvirinani mukutamba pamusoro pegore rapfuura Adreno 650. Mhedzisiro yacho ndeyekuti OnePlus 9 Pro inofadza chose kushandisa kune zvese kubva kupuruzira kuburikidza nevezvenhau, kubhurawuza, uye kutamba mitambo yakanakisa yeApple. Foni yaibata zvese zvandaikanda pairi ndisina kubuda ziya, uye mumazuva gumi andakashandisa handina kuona chero kusagadzikana kana kudzikira chero. Ichi hachisi chinhu chinodzora kunyangwe mushure memakore mashoma ekushandisa.
Ipo iyo Qualcomm chipset mukati uye iyo pachezvayo ichipa mikuru mibairo, OnePlus iri kupa mashoma maficha ekuvandudza iko kupisa kweyekushandisa kwechigadzirwa. OnePlus Cool Kutamba ndeye nyowani yekuwedzera iyo inoshandura kupisa kupisa kubva kune simbi yepakati-furemu kune girazi kumberi uye kumashure.
Kufunga kwacho ndechekuti iwe unogona kubata iyo yepakati-furemu neminwe yako paunenge uchitamba mutambo, saka nekupusha kupisa kubva mugirazi, furemu pachayo hainyanye kupisa. Iyo chishandiso zvakare ine shanu-yakaturikidzana grafiti jira uye hombe yemhepo kamuri yekusimudzira mutambo wemitambo.
Kunyange izvi zvichinzwika sedzakanaka mukufungidzira, iyo OnePlus 9 Pro yakanyanyisa kupisa pandakanga ndichigadzira foni, uye zvakasvika padanho rekuti ini handina kukwanisa kuvhura kamera uye chipset yakazvimbidzika kudzora kupisa. Nekutenda, iyi yanga isiri dambudziko kutevera iyo yekutanga setup, asi kekupedzisira nguva yandakamhanyira mune iyi chaiyo nyaya yaive pa Sony Xperia Z makore mashanu apfuura.
Chimwe chinhu icho OnePlus akanyatso rovera chizvarwa ichi ndiyo haptic injini. Iyo mota yekudengenyeka paOnePlus 9 Pro ndeimwe yeakanakisa andakamboshandisa pane chero foni, uye inounza granular mhinduro yekuratidzira kwekuratidzira uye kurova kwe keyboard. Kunge OnePlus 8 Pro, iyo 9 Pro inopa IP68 guruva uye kushora kwemvura. Nepo yakajairwa OnePlus 9 ichipotsa pane yepamutemo IP chiyero, OnePlus yakaratidza kuti yakajairwa vhezheni zvakare haina mvura - haina kungozivikanwa. (Iyo T-Mobile musiyano ndeye IP68 yakasimbiswa, hazvo, uye zvingangodhura zvakati wandei semhedzisiro.)
Kana zviri zvekubatanidza, iyo OnePlus 9 Pro ine Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, uye iyo AptX HD uye LDAC odhiyo macodec. Ini handina kusangana nenyaya chero nekubatana neWi-Fi; foni yaigara ichiendesa bandwidth inodarika 500Mbit pamusoro peWi-Fi 6, uye pakanga pasina nyaya neBluetooth futi. Kufanana nemakore apfuura, mamwe misiyano inouya neyakaviri-SIM yekubatanidza seyakajairwa, asi kwete iwo akasiyana eUS, uye chishandiso chine kufona kweWi-Fi pamwe neVoLTE, nekuwanika kwakasiyana nemutakuri nedunhu.
Nyaya hombe yandinayo nefoni maererano neiyo Hardware ndiyo nzvimbo yeinonzwa minwe. Iyo optical module inokurumidza kuratidza uye kuvimbika mukushandisa kwemazuva ese, asi inogara pasi zvakaderera kwazvo pachiratidziri, ichiita kuti zvive zvinonetsa kuwana. Ini ndainyanya kuvimba nesoftware-yakavakirwa kumeso kuvhura kwechokwadi, uye nepo isina kunyatso chengeteka senzwi remunwe, inokurumidza zvinoshamisa.
Iyo OnePlus 9 Pro ine anodiwa ma 5G mabhendi evatakuri vese veUS, asi iwe unongogona chete kuishandisa paT-Mobile neVerizon.
Imwe quibble iri kutenderedza kubatanidza kwe5G. Iyo OnePlus 9 Pro ine Sub-6 uye mmWave 5G yekubatanidza muNorth America, ichiita kuti chishandiso chikwanise 5G paT-Mobile, AT & T, uye Verizon. Iyo ine N1, 2, 3, 7, 25, 28, 41, 66, 71, 78 mabhendi eSub-6 uye N258, 260, 261 pamusoro mmWave, asi zvisinga tsanangurike, OnePlus iri kudzikamisa kubatana kwe5G kune maviri eaya matatu makuru anotakura. .
Iyo OnePlus 9 Pro haishande pane AT & T's 5G network kunyangwe iine anodiwa 5G mabhendi. Foni ichave iripo mune ese akavhurwa vhezheni uye T-Mobile inotakura edition, asi kunyangwe kana iwe ukatenga iyo isina kuvhurwa modhi, iwe unogona chete kuwana 5G yekubatana paT-Mobile uye Verizon, iyo yakasimbisa foni musi waMarch 27. MaMVNO anoshandisa T-Mobile 5G anoita kunge anoshanda mushe, zvisinei - mumwe wandinoshanda naye Hayato Huseman akakwanisa kutora yake OnePlus 9 Pro yakanyoreswa paGoogle Fi uye akagona kuwana 5G kubatana.
Uku kumisikidza kwe AT & T kunoita kuti iyo 9 Pro ive yakaoma kutengesa muUS, uye ini handinzwisise kuti nei OnePlus yakasarudza kukanganisa nemaune kushandiswa kweiyo yazvino mureza.
Ipo iyo 9 Pro iine mmWave mabhendi, yazvino OnePlus 9 misiyano inongopa Sub-6 5G, kuitira kuti iyo imwe foni ishande paVerizon's mmWave 5G network, OnePlus ichafanirwa kupa SKU nyowani - sezvayaingoita gore rapfuura ne OnePlus 8 UW.
MuCanada, uko Sub-6 5G iri kuwedzera, iyo OnePlus 9 Pro haizoone tekinoroji iri kuwedzera zvachose; haisi kunyange mu firmware kunyange zvazvo hardware inotsigira. Dzimwe shanduro dzeOnePlus 9 Pro dzinogumira kune Sub-6 5G kubatika, nemuenzaniso weEuropean unowana mabhendi N1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, uye Indian vhezheni inowana maviri chete: N41, 78. Chikwata cheIndia chine 5G chinobatanidza muzita chete, uye neyakajairika sevhisi ye5G isina kurongerwa kutanga kwemakore mashoma, ino ndiyo poindi poindi ikozvino.
OnePlus 9 Pro, OnePlus 9 & OnePlus 9R Magadzirirwo
Pamusoro peiyo OnePlus 9 uye 9 Pro, pane chechitatu mudziyo unonzi OnePlus 9R urikuuya kuIndia neChina.
Ini ndakazivisa kutanga kwegore rino kuti iyo OnePlus 9R - iyo yaidaidzwa kunzi OnePlus 9 Lite mukati - ichave inofambiswa neiyo Snapdragon 865. Izvo chaizvo zviri izvo, asi chipset yakanzi iyo Snapdragon 870 ichitevera Qualcomm's rebranding yeayo 2020 mureza wepuratifomu.
Iyo OnePlus 9R isarudzo inonakidza mune OnePlus 9 dzakateedzana; ine 6.5-inch 120Hz LCD inoratidzira uye inoratidzira yakafanana 48MP Sony IMX586 kamera seiyo OnePlus Maodzanyemba pamwe ne16MP wide-angle lens, uye iine imwecheteyo 4500mAh bhatiri seyakasara yeOnePlus 9 mamodheru ane 65W wired kuchaja.
Foni iyi ine polymer yepakati-furemu, uye inopotsa pane iyo Hasselblad yekumaka, ingango chengetedza mutengo. Mazhinji emahara akafanana kune egore rapfuura OnePlus 8, uye foni inowanikwa muIndia ye for 39,999 ($ ​​550) yeiyo 8GB / 128GB vhezheni, ₹ 5,000 ($ 70) isingasviki pakutanga kwekutanga kweOnePlus 9.
Heino zvizere zvizere pane iyo OnePlus 9 dzakateedzana:
Imwe Kuwedzera 9R
uchishandisa maitiro Android 11
kuratidza 6.5-inch 120Hz AMOLED
2400 × 1080 (20: 9)
Gorilla Glass 5 6.7-inch 120Hz LTPO AMOLED
3216 × 1440 (20.1: 9)
Dual curved skrini
Gorilla Glass 5 6.5-inch 120Hz Fluid Ratidza
5nm Snapdragon 888
5nm Snapdragon 870
RAM 8GB / 12GB LPDDR5 8GB / 12GB LPDDR5 8GB / 12GB LPDDR4X
chengetedzo 128GB / 256GB UFS3.1 128GB / 256GB UFS3.1 128GB / 256GB UFS3.1
Shure kamera 1 48MP Sony IMX689
f / 1.8, 1.12um, EIS
8K pa30fps, 4K pa60fps
Hasselblad Kamera yeMafoni 48MP Sony IMX789
f / 1.8, 1.12um, OIS, EIS
8K pa30fps, 4K pa120fps
Hasselblad Kamera yeMafoni 48MP Sony IMX586
f / 1.7, 0.8um, OIS, EIS
4K pa 60fps
Hasselblad Kamera yeMafoni
Shure kamera 2 50MP Sony IMX766 (yakafara-kona)
f / 2.2, yemahara lenzi
4K pa 60fps 50MP Sony IMX766 (yakafara-kona)
4K pa 60fps 16MP (yakafara-kona)
f / 2.2, 123-degree munda wekutarisa
Shure kamera 3 2MP monochrome kamera 8MP nhare
f / 2.4, 1.0um
3x Optical Zoom 5MP macro lens
Shure kamera 4 ❌ 2MP monochrome kamera 2MP monochrome
Front kamera 16MP Sony IMX471
f / 2.4, 1.0um, EIS
Yakagadziriswa 16MP Sony IMX471
Kubatana Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
NFC, AptX HD, A-GPS Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
5G (North America) Sub-6: N1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 Sub-6: N1, 2, 3, 5, 7, 8, 25, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78
mmWave: N258, 260, 261 ❌
5G (Europe) Sub-6: N1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 Sub-6: N1, 3, 5, 6, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 ❌
5G (India) Sub-6: N41, 78 Sub-6: N41, 78 Sub-6: N78
bhatiri 4500mAh (2 x 2250mAh), USB-C 3.1
65W Warp Charge 65T (10V / 6.5A)
15W Qi isina waya kuchaja (North America / Europe) 4500mAh (2 x 2250mAh), USB-C 3.1
50W Warp Charge 50 Wireless (In: 10V / 6.5A, 20V / 3.25A; Kunze: 50W max) 4500mAh (2 x 2250mAh), USB-C 3.1
65W Warp Charge 65 (10V / 6.5A)
Stereo mutauri USB-C
chibatiso In-kuratidza zvigunwe zvegunwe (maziso) In-kuratidza zvigunwe zvegunwe (maziso) In-kuratidza zvigunwe zvegunwe (maziso)
miganhu 160 x 74.2 x 8.7mm (North America / Europe)
160 x 73.9 x 8.1mm (India / China) 163.2 X 73.6 X 8.7mm 161 X 74.1 X 8.4mm
uremu 192g (North America / Europe)
183g (India / China) 197g 180g
mavara Nguva yechando Mhute, Arctic Denga, Astral Nhema Mangwanani Mhute, Pine Green, Stellar Nhema Lake Blue, Carbon Nhema
Zviripachena nei OnePlus iri kuvhura iyo OnePlus 9R padivi peyakajairwa uye Pro mamodheru muIndia. Iine yavo 2021 mireza inotora yakakura 16% kukwira kwemutengo kupfuura gore rapfuura, kambani inoda kukosha-yakatarisana nhare kuti ichengetedze simba rayo munyika.
OnePlus 9 Pro: Battery upenyu
Iyo OnePlus 9 Pro inochengeta imwecheteyo 4500mAh bhatiri seiyo OnePlus 8T, uye inoshandisa iyo 65W inokurumidza kuchaja mwero zvakare. Iyo foni ine mbiri-sero system ine maviri 2250mAh mabhatiri, uye iyo 65W yekuchaja inotungamirwa mumaviri 32.5W hova kuti panguva imwechete ubhadhare maseru ese ari maviri.
Chikamu chakanakisa nezve OnePlus 'inokurumidza kuchaja tech ndeyekuti foni pachayo haipisa. Iyo yekuchaja matunhu inoendeswa kune charger, uye izvo zvinovimbisa kuti mudziyo haupfuure kunyangwe iine 65W kuchaja. Chaja pachayo inoshanda pamusoro peiyo USB-PD standard kusvika pa45W, kuti ugone kuishandisa kuchaja mamwe mafoni kana zvishongedzo. Zvakare, iwe unogona kushandisa mamwe majaja kukwidza kumusoro iyo OnePlus 9 Pro, asi kumhanya kunogumira kune 18W.
Zvinongotora maminetsi makumi maviri nemapfumbamwe kuti ubhadhare zvizere iyo OnePlus 29 Pro - uye nemaminitsi makumi mana nematatu zvisina waya.
Kwechizvarwa chino, OnePlus iri kugadzira machira mashoma ekuendesa muripo kunyange nekukurumidza. Foni ine gumi nemaviri sensors ekugadzirisa kupisa uye kudzora voltages pane iyo nhunzi, uye semhedzisiro, inogona ikozvino kubhadharisa kubva zero kusvika 12% mumaminitsi makumi maviri chete, uye kubhadharisa kuzere kunotora chete maminetsi makumi maviri nemaviri - maminetsi gumi akaderera pane iyo OnePlus 75T. Nekuda kweshanduko, tech yekuchaja yave kudaidzwa Warp Charge 65T.
Imwe inowedzera yekuwedzera gore rino ndeye 50W isina waya kuchaja. OnePlus yakaunza 30W isina waya kuchaja gore rapfuura, uye iyo tech iri kukwidziridzwa ku50W. Nekutenda, hapana tambo yakabatanidzwa panguva ino; iyo isina waya charger haina kana tambo yakasungwa, uye uchafanirwa kushandisa OnePlus 9 Pro's Warp Charge 65 wall plug kana chero 65W USB PD charger kuisimudza - inoda 10V / 6.5A kana 20V / 3.25A .
Iyo isina waya charger inotora chete maminetsi makumi mana nemana ekuchaja zvizere bhatiri pane iyo 43 Pro, asi ine yakavakirwa-mukati fan uye inowanzo kuve inonzwika ruzha. Iko kune yekurara mode mode kana iwe uchida kusiya foni pane charger husiku hwese; mune iyi mode, iyo isina waya charger inodonhedza iyo kifaa uye feni yadzimwa. Iwe unogona kutora iyo OnePlus isina charger ye $ 9, uye inobhadharisa nguva zhinji pamusoro peiyo Qi protocol pa70W.
Hupenyu hwebhatiri hwakanyatso pakati pa120Hz - uye kana iwe ukachinjira kuQHD +, uchafanirwa kuvhara mukati zuva risati rabuda.
Zvakanaka kuti foni inobhadharisa nekukasira, nekuti unenge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge wakura Kunyangwe iyo LTPO kuratidza yakagadzirirwa kugadzirisa kugona kwebhatiri, izvo hazvireve kuti zvinoshandura mukushandisa kwezuva nezuva. Iyo OnePlus 9 Pro ine zvine mwero hupenyu hwebhatiri neiyo 120Hz sarudzo inogoneswa, uye kana iwe ukachinjirawo kuQHD + resolution, iwe uchanetseka kuwana kukosha kwezuva.
Nesarudzo yakaiswa kuQHD + uye 120Hz mwero wekuvandudza unobvumidzwa, ini ndakaenzana 3.5 kusvika kumaawa mana e-screen-on-time mukati mezuva rezuva. Ini ndaive neAOD inogoneswa mukati mese, uye pakupera kwezuva (nguva dzakatenderedza 11pm), bhatiri raigara richiwira pasi pe20%. Rimwe zuva randakabuda ndikachinjira kune 4G dhata kwemaawa matanhatu kana zvakadaro, ndaifanira kuvhara mukati zuva risati rapera.
Hupenyu hwebhatiri hahuna kukwana senge iyo OnePlus 8 Pro, 8T, kana yakawanda 2021 mireza - ini ndaigara ndichiwana nani manhamba ne Xiaomi Mi 11. Idle drain zvakare iri yakasarudzika yakakwirira. Kana yasiyiwa husiku kubva ku12am kusvika 7am ine AOD yakaremara, huwandu hwebhatiri hwakaderera ne8% paavhareji, iyo yakapetwa katatu kupfuura mamwe mafoni andakashandisa gore rino.
Ehe, iwe unogona kuwedzera hupenyu hwebhatiri nekudzora iyo resolution kune FHD +, asi izvo zvinokunda pfungwa yekuve nefoni ine QHD + kuratidza. OnePlus yakabvuma kuti hupenyu hwebhatiri inyaya pane iyo OnePlus 9 Pro, uye iri kushanda pane software yekuvandudza iyo ichavandudza hupenyu hwebhatiri. Asi hapana mhedzisiro yekuti riini rinozovhurwa, saka kana iwe uri kutsvaga kutenga iyo 9 Pro pakuvhura, ziva kuti hupenyu hwebhatiri hausi kure nakanaka.
OnePlus 9 Pro: Cameras
Ipo iyo OnePlus 9 Pro iine chivimbo chitsva dhizaini uye inonakidza Hardware shanduko, iyo hombe yekuvandudza nzvimbo yakatenderedza makamera. Iyo foni inoratidzira nyowani 48MP f / 1.8 Sony IMX789 sensor ine hombe 1.12-micron pixels uye OIS. Ikozvino kune 50MP f / 2.2 yakafara-angle lens ine Sony IMX766, 8MP f / 2.4 telephoto lens ine 3x optical zoom, uye 2MP monochrome module. Mberi kumberi, iwe unowana 16MP yakagadziriswa-inotarisisa Sony IMX471 kamera iyo isina kuchinjika kwemakore maviri apfuura.
Iine OnePlus 8 Pro uye 8T, zvaive pachena kuti OnePlus yaingova isina makamera ekugadzirisa makwikwi ekukwikwidza kurwisa Samsung, Google, Xiaomi, OPPO, uye vamwe vagadziri venzvimbo. Ndipo panopinda Hasselblad; OnePlus yakaisa mari inosvika mamirioni zana nemakumi mashanu emadhora muchibvumirano chemakore matatu icho chinobatanidza makambani ese ari maviri anoshanda pamwe nemakamera efoni, saka uku hakusi kudyidzana kamwe chete.
Hasselblad's color tuning uye akakwidziridzwa maseru akagadzira imwe yeakanakisa makamera iwe aunowana nhasi.
Kune iyo OnePlus 9 yakateedzana, Hasselblad yakapa nongedzo pamusoro pekugadzirisa kwemavara kune ese mafikisheni mamodule, modhi dzekupfura, uye mamiriro emwenje. Ipo kuyedza kusvika parizvino kwakanangana nesoftware, OnePlus yataura kuti kudyidzana kuchasanganisira chinhu chehardware zvakare mumakore anotevera.
Mhedzisiro yacho ndeye nyowani Hasselblad Kamera yeMafoni ndiyo default kamera app pane OnePlus 9 uye 9 Pro. Iwe unowana bhatani revhavha yeworange kune ese mafoto modhi - rukudzo kunaHasselblad - uye kune nyowani "Shot pane OnePlus x Hasselblad" watermark iwe yaunogona kugonesa mune zvigadziriso. Iwe unogona zvakare kugonesa shizha shutter kurira iyo inoteedzera kurira kweHasselblad kamera.
Iyo kamera inowona pachayo yatora mashoma mashoma, ane mavara eorenji mavara akapararira mukati mese, asi mabhesiki achiri akafanana negore rapfuura: iwe unowana dzese nzira dzekupfura dzakaiswa mubhoni pazasi, uye kune matoggosi yeiyo timer, kupenya, macro modhi, yakazara-res 48MP modhi, naka mhedzisiro, uye magadziriso
OnePlus iri kupawo zvinokwezva nekurekodha vhidhiyo. Iyo OnePlus 9 Pro inogona kupfura 4K vhidhiyo kusvika pa120fps, uye pane kugona kupfura 8K mavhidhiyo pa30fps - yekutanga yekambani.
Kutenda kune akakwidziridzwa ekufungidzira mamodule uye Hasselblad color tuning, iyo OnePlus 9 Pro inotora zvakanyanya zvirinani mafoto kupfuura ayo akaitangira. Kupfura mumamiriro ezuva masikati kuri kuenderana nemafoni akanakisa aripo nhasi; iwe unowana yakanakisa simba renji uye nemazvo mavara. Iyo 2MP monochrome lens inoshanda seye Hardware firita, ine mafoto akatorwa neiyo huru 48MP kamera pachayo.
Iyo OnePlus 9 Pro inonyanya kupenya mune yakaderera-mwenje mamiriro, uye apa ndipo apo Hasselblad's color sainzi yakabhadhara chaiyo mibairo. Mifananidzo inotorwa mune yakaderera-mwenje ine zvakawanda zvehuwandu, akazara mavara, uye mashoma ruzha mazinga. Chiratidzo chekamera yakakura ndechekuti iwe unogona kutora makuru mafoto mune chero mamiriro emwenje zvisingaite, uye iyo OnePlus 9 Pro inozopedzisira yaendesa pane ichi chivimbiso.
Iyo chishandiso inokwanisa kubatirira pane chidzidzo uye inotora mashandisirwo epfuti kunyangwe mune zvakanyanya kudenha zviitiko zvekupfura. Mimwe mifananidzo yakatorwa mune yakashomeka kana isina mwenje inowanzoita ruzha kutenderedza mativi, uye iwe unogona nyore kugadzirisa izvi neiyo yakatsaurirwa Nightscape modhi. Mune ino modhi, foni inotora akateedzana mafoto pamatanho akasiyana ekuburitsa uye anoasungirira pamwe chete, ichigadzira yakajeka mufananidzo ine yakaderera ruzha mazinga.
Iyo 50MP yakafara-angle lens pane iyo OnePlus 9 Pro ndiyo yakanyanya kunaka iwe yaunowana pane chero foni nhasi. Iyo lens inotora yakafanana caliber yemafoto seyekutanga 48MP kamera, uye mhedzisiro mapfuti haana chero dhiramu yekukanganisa. Iwe unogona kushandisa yakatsaurwa husiku modhiyo neiyo yakafara-kona lens zvakare, uye inogona kupfura 4K vhidhiyo kusvika kusvika 60fps.
Iyo yakakura-enguru lens inowedzerawo se macro shooter, uye zvakasiyana neakazvitsaurira 5MP macro lenses izvo zvave zvakajairwa, iwe unowana chaizvo mapfuti akazara neiyo OnePlus 9 Pro. Chekupedzisira, iyo foni ine Pro modhi iyo inoita kuti iwe upfure kusvika ku12-bit RAW, uye iwe unowana seti yakajairwa seti yekudzora kuti ugadzirise manyore ISO, chena chiyero, kuburitsa, tarisa, uye zvimwe.
Kana iri iyo 8MP telephoto lens, module yacho pachayo yakafanana negore rapfuura, uye inoita basa rakaringana rakaringana kumusoro kweiyo zoom factor ye3x; enda kupfuura ipapo uye iwe unobva watanga kuona zvigadzirwa. Ipo iyo 16MP yekumberi kamera inoshandisa iyo imwechete lenzi sezvizvarwa zvishoma zvekupedzisira, Hasselblad's color tuning yaita mutsauko chaiwo pano futi, uye iwe unowana yakanaka selfies mune chero angangoita mamiriro emwenje.
Pakazara, iyo OnePlus 9 Pro ine kamera inozvibata pachayo ichipesana neGPS S21 Ultra, Xiaomi Mi 11, uye mamwe maratidziro eApple. Kubatana kweHasselblad kwagadzirisa nyaya iyi kune OnePlus, uye zvichave zvinonakidza kuona kuti iko kudyidzana uku kunoenda mune ramangwana.
OnePlus 9 Pro: Software
Icho chiitiko che software chinoramba chichive chikamu chakakura chekuti nei OnePlus yakamira kubva kune vavakwikwidzi. Iyo kambani inotarisa pane yakachena interface isina chero bloatware yakagadzika iyo bar yechitatu-bato makanda, asi neOxygenOS 11 gore rapfuura, OnePlus yakachinjira kumutauro wekugadzira wakafemerwa neSamsoni One UI.
Izvo zvakati, shanduko hadzina kunyanya kufadza, uye iwo maratidziro pachawo akangoita semvura sekare. OnePlus yaita basa risinganzwisisike kugadzirisa OxygenOS ye 120Hz kuratidzwa; mifananidzo inonzwa yakatsetseka uye hapana lag kana jitter chero kupi. Izvo zvakati, pane mashoma software quirks: memory optimization inoramba ichitambudza paOxygenOS, uye ini ndaifanirwa kudzima chimiro chemaapplication seSlack neNewton Mail kuti ndiwane ziviso.
Iko hakuna matsva maficha pano, asi OxygenOS 11 inoenderera kuendesa yakakura kwazvo chiitiko.
Nheyo yeOxygenOS ichiri yakasimba muna 2021: customizability. Iwe unowana dzakasiyana siyana sarudzo dzekugadzirisa, kusanganisira maAOD masitayera, mavara ekumaka, masystem ehurongwa - pamwe nekusarudza yechitatu-bato icon pack - mafonti, uye mifananidzo yeiyo in-screen chigunwe kuverenga. Iko zvakare kune Horizon mwenje ficha yakafanana neEdge mwenje pamaGirazi mafoni - iyo ficha inovhenekera mativi echidzitiro kuitira inouya notices, uye inofanirwa kuve imwe nzira kune iyo legacy LED ziviso mwenje.
Zvimwe zvinhu zvinosanganisira zvinesimba mamiriro, akasarudzika mamiriro erima, kuvandudzwa kweZen Mode, uye zvese zvinowedzerwa Google zvakabikwa muApple 11: Kutaurirana kwekutarisa, mvumo dzeimwe-nguva, inoridza midhiya inoridza mumataira ekugadzirisa, uye masimba edzimba edzimba mumagetsi emagetsi.
Kana zvese izvo zvichinzwika kuzivikanwa, imo nekuti ruzivo rwe software pane iyo OnePlus 9 Pro yakafanana neiyo 8T. OnePlus haisi kuunza chero nyowani maficha pano, uye nepo iyo kambani yakachinja zita remutambo wayo turbo ficha kubva kuFnatic Mode kuenda kuPro Gaming Mode, ini ndichiri kuwana mareferenzi kune ekare.
Kana zviri zvekuvandudzwa, OnePlus inoti ichaendesa yakajairwa maviri epuratifomu ekuvandudza uye makore matatu ezvokuchengetedza zvigamba. Iine Samsung ikozvino ichipa matatu akavimbiswa ekugadziriswa kwete kwete pamireza yayo chete asiwo epakati-renhare mafoni senge iyo Galaxy A52, OnePlus inoda chaizvo kuita zvirinani pano. Pachishoma chisina chinhu, OnePlus inoda kuendesa matatu epuratifomu achifunga kuti ingani iyo 9 Pro inodhura, asi handizvo.
OnePlus yakachinjira kufoni yekufona yeGoogle uye Android Meseji seye default dialer nekutumira mameseji vatengi gore rapfuura, uye ndizvo zvazviri pane OnePlus 9 Pro futi. Iyo software haina zvakawanda munzira yebloatware - iyo Facebook debacle ichiri nyowani mupfungwa dzevashandisi - uye mashoma maOnePlus maapplication uye masevhisi akaisirwa kunze kwebhokisi anogona kubviswa zviri nyore.
OnePlus inoshandisa India seye testbed yekuunza nyowani software maficha muOxygenOS, uye imwe yeiyo iRed Cable Club, chirongwa chekuvimbika chinopa mibairo uye mavhavha echipo kune varidzi veOnePlus. Iwe unogona kupinda muRed Cable Club uchimisa foni, asi iwe uchiri kuona push yekuzivisa ichikukurudzira kusaina iwe kana uchinge waenda kuchiratidziro chemumba kekutanga.
Kune zvakare chinhu chitsva chinonzi padyo nechaja zviteshi. OnePlus yakaisa nhepfenyuro dzinokurumidza kumahofisi enhandare muIndia uye yakati ichazviita pazviitiko zviri kuuya zvekutanga pamwe nezvitoro zvinobuda, uye zviteshi izvi zvinoshandisa mabheoni kuona mafoni ari pedyo eOnePlus - kana iwe uine chinhu chakabvumidzwa. Iyo Yepedyo Yekuchaja Zviteshi toggle iri mune bhatiri sub-menyu mune zvigadziriso, uye chimiro chinonyanya kushandisa nzvimbo yako kumashure uye inokuzivisa iwe kana foni yako yave padyo nechaji chiteshi.
OnePlus 'ichangotanga kuyedza pazvinhu zvitsva haina kubereka michero izvozvi.
Iwe uchaona zvinogara zvichikurudzira kugonesa padyo nechaja Zviteshi mukati meOxygenOS, uye ini handinyatsonzwisisa kuti nei chinhu ichi chiripo. Chokwadi, izano rakanaka rekumisikidza zviteshi zvekuchaja panzvimbo dzakapamhamha senge nhandare uye kutanga zviitiko, asi unogona kuzviona zviri nyore; haufanire kugonesa chinhu chinovhotesa dhata renzvimbo yako nguva dzese kuti uite saizvozvo. Kune zvekare chokwadi chekuti kuvhurwa kwechinhu ichi pakati pehosha kunoita sekusina zano.
Nzvimbo dzepedyo dzekuchaja handiyo yega OnePlus ficha inoshungurudza. Iko kusarudzika kwekudonha-pasi chiratidzo mukati meOxygenOS hakukupe iwe ziviso pane, asi pachinzvimbo zvinokutungamira kune OnePlus Shelf, iyo inosanganisira ako ese majeti uye mapfupi. Saka iwe uchafanirwa kunanga mukati mekugadzika kwemeso epamba kuti uchinje maitiro asipo.
Sezvo ndashandisa OxygenOS 11 kwemwedzi yakati wandei izvozvi, nyaya yangu hombe ine maviri-eparty apps: Zvirongwa uye Garari. Ipo zvinhu zvekutanga zvemenu mukati meiyo peji rezvisarudzo zvinogara pasi pazasi pachiratidziro - senge One UI - dhizaini haina kutambanudzira kune e-sub-menyu. Enda mune chero chikamu uye uchaona kuti sarudzo yemenyu inotangira kumusoro kwepeji, kungofanana neshanduro dzekare dzeOxygenOS.
Tsananguro yeOnePlus iyo yakachinjira kune iyo nyowani dhizaini kubatsira ruoko-ruoko ruoko haina mvura yakawanda. Kana iri Garari, iyo yakarongedzwa matabhu iri kure nekunzwisisa, uye OnePlus inoda kuita zvakawanda kudzidzisa vashandisi pane shanduko. Zvakare zvakare, iwe hauone chero yakawandisa maitiro kunze kwemashoma-epamberi maapplication - zvakanaka kuona OxygenOS ichimbundira Google yekutaurirana suite senge yakasarudzika sarudzo.
Pakazara, OxygenOS 11 inoenderera kuve imwe yeakanakisa mafafitera aunowana pane Android. OnePlus iri pachena iri kutevera vashandisi vevazhinji vane switch - izvo zviri nyore kutaura kubva pazvinhu zvairi kuunza - asi kusvika parizvino, kuyedza kwayo kutsva kwave kushaya mukana, kutaura zvishoma.
OnePlus 9 Pro: Mukukwikwidza
Iyo OnePlus 9 Pro inobuda panguva inonakidza. Sezvinoreva shamwari yangu Jerry Hildenbrand anoti, uyu ndiwo mukana wekambani ku nyura mune zvakanyanya mushure memakore ekushaya simba mumaraini. Ipo kambani payakatangisa yavo yekutanga mutakuri modhi neT-Mobile, iyo OnePlus 6T, kumashure mu2018, zvakanetsa kutora pfungwa yerunhare-kutenga ruzhinji kusununguka nemhando dzakadai seGlass uye iPhone. Kunyangwe zvisingarwadzise kuti iyo 9 Pro ndiyo foni yayo yakanyanya kunaka, uye ichitsigirwa neT-Mobile zvakare, iri kukwikwidzana neiyo Samsung lineup iyo zvakare haina kumbobvira yasimba.
The Galaxy S21 Ultra inonzwa kunge mukwikwidzi akakodzera weOnePlus 9 Pro, uye ingango fananidzwa neyakaenzana, asi kukura kwayo uye kurema uye resolution-inorema kamera haisi kunyatso tarira mutengi mumwe chete. Panzvimbo iyoyo, ini ndingati iyo OnePlus 9 Pro inokwikwidza yakanangana neGPS S21 +, chishandiso chisina kunyorwa icho, kunyangwe paine kuvandudzwa kushoma pane iyo Galaxy S20 +, inopa chiitiko chinoshamisa kwazvo. Iyo OnePlus 9 Pro chaizvo ine zvirinani kamera ruzivo kupfuura ese maviri egore-ekupedzisira-maGalaxys, chimwe chinhu chatisina kutarisira kuti tichazotaura kumashure mukutanga kwa2021, asi heino isu tasvika.
Mumwe mukwikwidzi wekufunga nezvayo ndeye OPPO Tsvaga X3 Pro, iyo inogovera yakawanda yakafanana zvikamu seye 9 Pro. Makamera ayo haana kunyatsonaka, uye software yeColorOS ichiri ngoro, asi ini ndiri fan hombe yekushamisa kwayo kamera dhizaini kupfuura iyo 9 Pro. Uyezve, maikorosikopu ayo inzira inonakidza yekuuraya imwe nguva.
Ipapo pane Xiaomi Mi 11. Xiaomi's 2021 mureza hauzotengeswe kuNorth America, asi muEurope nemimwe misika yepasi rose, inoenda kumusoro-ne-musoro neOnePlus 9 Pro. Iyo Mi 11 ine 120Hz AMOLED pani, Snapdragon 888, uye makamera ekumira anoyera kusvika kune izvo OnePlus iri kupa, uye chikamu chakanakisa ndechekuti iyo Mi 11 inodhura zvishoma pane iyo 9 Pro pa € ​​749 ($ 900). Iyo chete yekudzikira ndeyekuti MIUI 12 ine yakakwira yekudzidzira curve kupfuura OxygenOS.
Chekupedzisira, iyo OnePlus 9 Pro chaizvo ine makwikwi kubva kune yayo yega $ 729 mukoma gore rino. Iyo OnePlus 9 chigadzirwa chakanakisa chinovandudza munzira dzese pamusoro payo pachayo yakatangira. Nepo makamera ayo uye kuratidzwa kusingauyi padhuze kusvika padanho reiyo 9 Pro, inoshongedzerwa zvizere nguva ino kutenderera - kunyanya nekuchaja isina waya mubhodhi. Kana zvasvika kune iyo OnePlus 9 vs. OnePlus 9 Pro, zvese zvinodzikira kana iwe uchida kuisa mari mune yekuwedzera kamera kugona iyo inodhura foni inounza.
OnePlus 9 Pro: Unofanira kuitenga here?
Unofanirwa kutenga izvi kana…
Iwe unoda OnePlus foni ine mureza makamera
Iyo OnePlus 9 Pro inozopedzisira yanunura izvo vateveri veOnePlus vanga vachikumbira kwemakore akati wandei: kamera yakanakisa semafoni akanakisa anowanikwa nhasi. Iyo kudyidzana naHasselblad yakabhadhara iyo iyo mhando, uye iyo 48MP kamera inotora zvechokwadi yakasarudzika mifananidzo mune chero mwenje mamiriro. Iyo 50MP lens zvakare ndiyo yakanakisa yakafara-kona shooter iwe yaunowana pane foni.
Iwe unoda bloat-yemahara software
OxygenOS 11 haina chero bloatware kunze kwebhokisi, uye iyo UI pachayo inoyerera uye ine yakawanda yekugadzirisa maficha. OnePlus yaitawo basa rakakura kuendesa yakajairika meseji kune ayo mureza, saka kana iwe uchida foni ine yakachena software uye fluid UI, iyo OnePlus 9 Pro isarudzo yakanaka.
Iwe unoda kusagadzikana kuita
OnePlus inoziva chinhu kana zviviri nezve kupa mafoni-anotungamira mafoni, uye izvo hazvina kusiyana neiyo 9 Pro. Iine Qualcomm's yazvino Snapdragon 888 chipset pasi pehodhi, hauzoone chero kuderera kweanenge makore mashoma, kunyangwe nemitambo inonetsa kwazvo. Iyo foni zvakare ine 65W wired uye 50W isina waya kuchaja, uye iyo yekupedzisira kunyanya kuwedzera kwekumira.
Haufanire kutenga izvi kana…
Iwe unoda hwakavimbika hupenyu hwebhatiri
Parizvino, iyo OnePlus 9 Pro haingomiriri kune vayo vanokwikwidza maererano nehupenyu hwebhatiri. Foni haigone kubata zuva neQHD + resolution pa120Hz, uye nepo iwe uchikwanisa kudzikisa chisarudzo ichi kune FHD + uye kusimuka pakushandiswa kwezuva, hupenyu hwebhatiri hauratidze mureza we2021. OnePlus inoti ichaburitsa chigadziriso kugadzirisa hupenyu hwebhatiri, asi hapana nguva yenguva yakafanana.
Iwe uri kutsvaga ye5G mureza wekushandisa pane AT&T kana Verizon
Kunyangwe OnePlus yakawedzera mmWave mabhendi kuNorth America akasiyana eiyo 9 Pro, hazvibvumire iwe kushandisa iwo mabhendi. Foni inoshanda chete paT-Mobile 5G muUS - uye inosanganisirwa maMVNO anoshandisa iyo inotakura 5G, seGoogle Fi - uye ndizvo zvazviri kunyangwe neyakavhurwa vhezheni. Saka kana iwe uri kutsvaga kutenga iyo 5G foni kuti ushandise paAT&T kana Verizon, uchafanirwa kutarisa kumwe kunhu izvozvi.
Iine OnePlus 9 Pro kutanga pa $ 969, OnePlus yaida kurovera zvese. Nekutenda, yakwanisa kuita izvo chaizvo. Kubatana kweHasselblad kwakatungamira kumakamera akagadziridzwa, pamwe ne9 Pro ichikunda yakanakisa iyo Samsung yainofanira kupa muna 2021. Icho chete chiitiko chakakosha kana iwe ukatarisa mafambiro akaita OnePlus 8 Pro gore rapfuura.
Asi chii chinoita kuti OnePlus 9 Pro inyatso kuve chiitiko cheuzere. Iyo 120Hz AMOLED inoratidzira neLTPO tech ndeimwe yeakanakisa kuratidzwa pane chero foni nhasi, iyo Snapdragon 888 inovhura nhanho nyowani yekuita, uye OxygenOS iri kuenderera kumisikidza iyo bar yechitatu-bato maficha pane Android. Ini ndashandisa mamwe mafoni eSnapdragon 888-anemagetsi ane 120Hz mapaneru gore rino, asi neimwe nzira iyo OnePlus 9 Pro inongonzwa kuti yakanyanya mvura.
Kunge chero foni nhasi, kune zvakaderera. Hupenyu hwebhatiri kunze kwebhokisi hachisi icho chaungatarisira nefoni muchikamu chino, uye nepo OnePlus yati ichagadzirisa iyi nyaya, iyo yekuvandudza inogona kusaratidza kwemavhiki mashoma kana mashoma. Ikozve kune iyo 5G conundrum muUS - kunyangwe iyo foni iine anodikanwa 5G mabhendi evatakuri vese, inogumira kune T-Mobile.
Izvi zvinogona kunge zvichikonzerwa nekubatana kweOnePlus neT-Mobile; iyo kambani inoda tsoka muUS, uye panguva ino zvinoita kunge T-Mobile ndiyo yega mutakuri anoda kuipa. Saka OnePlus yakadzvanywa pakubatana kwe5G - ichiita foni isiri-yekutanga kune vatengi paAT & T neVerizon - uye nekudzoka, inoonekwa kuT-Mobile. Yakagadzirirwa kuwana 5G kubatanidza paVerizon pane imwe nguva, asi izvo zvinogona kunge zviri mwedzi mishoma pasi mutsara.
Chekupedzisira, OnePlus ine basa rakawoma rekugutsa vatengi muIndia kubhadhara ₹ 64,999 ($ ​​900) yeiyo 9 Pro. Iyo OnePlus 8 Pro yakatangwa pa ₹ 54,999 ($ ​​760) gore rapfuura - yakaderedzwa zvakanyanya pane mamwe matunhu - uye OnePlus vasingazive vakaisa tarisiro yekuti mireza yayo yaizodhura zvakanyanya munyika. Nezvo zvisiri izvo mune 2021, OnePlus ikozvino ichafanirwa kuona kuti ingamisa sei foni yayo mumusika unowanzo nyangadza kukwira kwemitengo.
Pakazara, zvakadaro, OnePlus akarovera izvo zvakakosha. Iyo yakareruka uye yakawedzera compact kupfuura iyo OnePlus 8 Pro ichiri kuendesa yakagadziridzwa mashandiro, akakwirira makamera, uye iri nani dhizaini. Uye iyo skrini iri chaizvo kugona. Izvo hazvina kukwana zvakakwana, asi zviri padyo neOnePlus zvasvika parizvino, uye ndicho chiitiko chakakosha.
Chinonyanya kukosha: Iyo OnePlus 9 Pro ine zvese zvauri kutsvaga mune ye2021 mureza. Iwo makamera anotora zvisingaite kupfura mune chero mamiriro emwenje, foni ine dhizaini dhizaini uye inopa yazvino yemukati Hardware ine 65W wired uye 50W isina waya kuchaja, uye iwe unowana yakachena interface pamwe nevimbiso yekugara uchigadzirisa. Hupenyu hwebhatiri uye nenyaya dze5G padivi, iyi ndeimwe yemafoni akanakisa nhasi.
Ongorora Changelog, Kubvumbi 2021
Chinyorwa ichi chakatanga kuburitswa munaKurume, 2021. Yakagadziriswa muna Kubvumbi 2021 neshanduko dzinotevera:
Yakajekesa 5G kuenderana muUS mushure meVerizon certification.
Wakawedzera kutaurwa nezve zvinoramba zvichionekwa pamupendero nyaya uchitaipa.
Wakawedzera katsamba nezvekushomeka kwekuwanikwa kwemuenzaniso wekupinda-chikamu.
Ongororo yeOnePlus 8T: Kubaya chiyero chakakwana
OnePlus 8 yakatevedzana: Runyerekupe rwese munzvimbo imwechete (Yakagadziriswa Kukadzi 24
OnePlus 9 ongororo: Zvinoita sekunge OnePlus yakagara
OnePlus 9 Pro vs OnePlus 9 vs OnePlus 9R: Ndeupi mutsauko?
OnePlus 6 kudzokorora kwenguva refu: Achiri kushamisika kana kutenga chikara ichi kana kwete?
OnePlus Z: Mhando, runyerekupe, kubvuza uye zvese zvaunoda kuti uzive